दिवे`श पोख`रेल अमेरि`कन आइडलको शीर्ष १० मा !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/दिवे`श पोख`रेल अमेरि`कन आइडलको शीर्ष १० मा !!
नेपाली मूलका दिवेश पोख`रेल अमेरिकन आइडलको शीर्ष १० मा पुग्न सफल भएका छन् ।आइ`तबार रातीको कार्य`क्रममा आ`इडलले शीर्ष २० बाट शीर्ष ११ प्रतिस्पर्धी छनोट गरेको हो ।
शीर्ष १० प्रतियोगी अडि`यन्सको भोट`मार्फत् छनोट गरिएको हो भने अर्का एक प्रति`योगीलाई निर्णायक मण्डलले छानेका हुन् । कोरोना भाइरसको महा`मा`रीका कारण प्रत्येक प्रति`योगीले आफ्नै घरबाट प्रस्तुती दिँदै आएका छन् ।
शीर्ष १० का लागि छनोट भएपछि दि`वेशले जोन डेन`भरको गीत ‘कन्ट्री रोड’ गाएका थिए । यसमा उनले ‘रेगे ट्वीस्ट’ थपेका छन् । नेपाली मूलका दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको शीर्ष १० मा पुग्न सफल भएका छन् ।
आइतबार रातीको कार्यक्रममा आइडलले शीर्ष २० बाट शीर्ष ११ प्रतिस्पर्धी छनोट गरेको हो । शीर्ष १० प्रतियो`गी अडिय`न्सको भोट`मार्फत् छनोट गरिएको हो भने अर्का एक प्रतियो`गीलाई निर्णाय`क म`ण्डलले छानेका हुन् ।
कोरोना`भाइरसको महा`मा`रीका कारण प्रत्येक प्रतियो`गीले आफ्नै घरबाट प्रस्तुती दिँदै आएका छन् । शीर्ष १० का लागि छनोट भएपछि दिवे`शले जोन डेनभरको गीत ‘कन्ट्री रोड’ गाएका थिए । यसमा उनले ‘रेगे ट्वीस्ट’ थपेका छन् ।